चाडबाडको मुखमा किन खुल्दैछन् विद्यालय ? – Sky News Nepal
२९ भाद्र २०७८, मंगलवार १७:११ मा प्रकाशित
भदौं २९, काठमाडौं । उपत्यकाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र स्थानीय तहका प्रतिनिधिको संयुक्त बैठकले असोज १ गतेदेखि विद्यालयहरू खोल्ने निर्णय गरेपछि अभिभावक र बालबालिकामा थप अन्यौलता छाएको छ । दशैतिहार लगायतका चाडपर्वहरू नजिकिएर बिदा दिनुपर्ने बेला आएको र बालबालिकामा कोरोना संक्रमण हुने डर कायम रहेकै बेला गरिएको विद्यालय खोल्ने निर्णयको सबैतिरबाट बिरोध भइरहेको छ ।
दशैतिहार लगायतका प्रमुख पर्वहरू नजिकिँदै गरेका बेला विद्यालय खुले पनि आफ्ना नानीबाबुलाई विद्यालय नपठाउने मनस्थितिमा अभिभावकहरू पुगेका छन् । वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठन गर्दै आएका अभिभावकले विद्यालयले मागे जति शुल्क तिर्दै आएका छन् । तर दशैको मुखमा विद्यालय खोल्न गरिएको हतारो केका लागि हो ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटा बालबालिकाको स्वास्थ्य पहिलो प्राथमिकता भएकाले अभिभावकहरूलाई छोराछोरी विद्यालय पठाउनैपर्छ भन्ने दबाब दिन नहुने बताउँछन् ।
दशै अघि नै विद्यालय खोलेर शुल्क उठाउन दबाब दिइरहेको आरोप खेपेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूले भने बाहिर आएको कुरा सत्य नभएको बताएका छन् । निजी विद्यालय सञ्चालकहरूको एउटा सङ्गठन प्याप्सनले बजारमा हल्ला भएजस्तो आफूहरूले विद्यालय खोल्न दबाब नदिएको बताएको छ । प्याव्सनका महासचिव कुमार घिमिरे अभिभावकलाई जबरजस्ती बालबालिकालाई विद्यालय पठाऊ भनेर दबाब दिन नहुने स्पष्ट पारे ।
कोरोना सङ्क्रमणको दर बिस्तारै घट्दै गए पनि धेरै भिँडभाँड हुने काठमाडौँजस्ता शहरमा जोखिम कायमै रहेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् । नेपालीहरूको ठूलो चाड दशै आउन २० दिन बाँकी रहँदा विद्यालय खोलेर थप संक्रमण फैलने पो हो कि भन्ने चिन्ता बढ्नु स्वाभाविक हो । रेडियो नेपाल